थाहा खबर: विदेशमा नेपालीको जीवनशैली
विदेशमा नेपालीको जीवनशैली
बेलायती नेपालीको जीवन बडो रोचक छ। सामान्यतः उस्तै वर्गको बेलायतीले जिउने जीवन र नेपालीको जीवनमा धेरै फरक छ। बेलायतमा झन्डै ४० प्रतिशत नागरिकसँग आफ्नो घर छैन। धेरै कामकाजी बेलायतीहरू किस्ताबन्दीमा पाइने घरको १० प्रतिशत डिपोजिट रकम पनि जम्मा गर्न सक्दैनन्।
तर, १० वर्ष बेलायत बस्ने नेपालीसँग प्रायः आफ्नै घर हुन्छ। जबकि, उक्त १० वर्षभित्र उसले आम बेलायतीले भन्दा १०औँ हजार पाउण्ड भिसा र अन्य कागजपत्रमा खर्च गर्नुपर्छ। उसले कमाइको केही अंश नेपाल पनि पठाउँछ।
नेपालीहरू शान र मानका ठूलै शौखिन पनि छन्। त्यसका निम्ति गच्छेभन्दा बढ़ी लगानी गर्ने पनि भेटिन्छन्। समानस्तरको बेलायतीले जीवनमा दुई चार च्यारिटी गर्दो रहेछ, तर नेपालीले सरदर हप्तामै दुई/चारवटा च्यारिटी भ्याउनुपर्छ। पाँच-दस पाउण्ड च्यारिटी भनेको एउटा बेलायतीका निम्ति ठूलो हो, तर नेपालीले २० भन्दा तल पैसा नै नगन्ने अवस्था छ। १०० भनेको केही होइनजस्तो भइसक्यो। चट्ट दुई/चारजनाको अगाडि उभिएर लगाउन पाइने पहेँलो खादा र भोलिपल्ट फेसबुकमा पाइने दुई/चार लाइकले १०० पाउण्ड कमाउँदाको दुःखकष्ट एकछिन बिर्साउने रहेछ। यसमा उदार र कोमल मन त पक्कै छ तर प्रतिस्‍पर्धाको भूमिका पनि निरन्तर बढ्दै छ।
संस्थामा बसेको बेलायती र कुनै संस्थामा नबसेको नेपाली भेट्टाउन मुस्किल छ। कुनै संस्थामा केही बन्न सकिएन भने पनि सल्लाहकारसम्म भए पनि बन्ने दाउमा जीवन बित्छ। बनाउनेले पनि सल्लाह होइन, भोलि अलिकति पैसो झर्छ कि भन्ने आशा राखेको हुन्छ। हरेक हप्ता एउटा नयाँ संस्था जन्मिनु सामान्य खबर हो। बेलायतका कुल राजनीतिक पार्टीभन्दा नेपाली दलका शाखाप्रशाखा बेलायतमा धेरै छन्।
बेलायतीहरू सरदर प्रतिहप्ता ३७.५ घण्टा काम गर्छन् र पनि जीवन काममा बितेको गुनासो गर्छन्। ५० घण्टाको काम कम भएर थप 'पार्ट टाइम' कामको खोजीमा रहेको नेपाली भने मुस्कुराई रहेको हुन्छ। उसले साथीभाई भेट्न, खान-खुवाउन र दुई तीनवटा नेपाली कार्यक्रममा जान पनि भ्याएकै हुन्छ। पहिलो पुस्ता भएकाले होला, कामबाहेक बाँकी बच्ने समय भने 'नेपाल'बारे नै सोचेर, बोलेर, पढेर र चिन्तन गरेर बितेको हुन्छ।
समान आय भएको बेलायतीभन्दा नेपालीको मोबाइल नयाँ र ब्राण्डेड हुन्छ। चढ्ने गाडी ठूलो र महँगो हुन्छ। खानपिन र रहनसहन पनि माथिल्लै हुन्छ। राजनीतिक चेत त १०औँ हजारमाथि हुन्छ।
नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई नभेटेको र नचिनेको त को नै बाँकी होला र यतैका मन्त्रीसँग सेल्फी टाँस्ने पनि धेरै नै छन्। म के छु भन्नेभन्दा पनि नेपालमा के थिएँ भन्ने धाक र रबाफले जिन्दगी तान्नेहरू यत्रतत्र छन्। म त नेपालमा जेल परेको नेता, त्यताको पुलिस, पत्रकार, अभिनेता, गायक आदि आदि भनेर यता मान खोज्ने र संगठन गर्ने त कति कति।
हरेक नेपालीसँग नेपाल कसरी बनाउने भन्ने ज्ञान र चेत त सामान्य भयो, विश्व कसरी हाँक्ने भन्ने सोधेर हातमा माइक दिनुभयो भने तीनघण्टा धाराप्रवाह बोल्ने क्षमता हुन्छ। विश्वले नेपालीको यस्तो अद्‍भुत क्षमताको कदर कहिले गर्ला? जति धेरै सोच्यो, त्यति भव्य लाग्छन्, मलाई नेपालीहरू। र, त्यसभित्र म आफैँ पनि छु। जय नेपाल !
नारायण गाउँलेको फेसबुकबाट साभार